Mpanopaka fikosoham-bary, paompy mamolavola kofehy, bitika fandatsahana lasantsy - MSK
Round Orona Milling Cutter
Manaova fitaovana manapaka kilasy voalohany eran-tany.
Miaraka amin'ny milina fikosoham-bary enina axis sy Zoller Five Axis Cutting Tool Test Equipment nafarana avy any Alemaina, ny ekipa teknika MSK(Tianjin) dia hamaly ny fangatahanao ao anatin'ny fotoana fohy.
MSK (Tianjin) nanolo-tena hamokatra avo-end, matihanina sy mahomby CNC fitaovana: fikosoham-bary, fandavahana bits, reamers, paompy, cutter insert sy fitaovana manokana.
manome ny mpanjifanay vahaolana feno izay manatsara ny fiasan'ny machining, mampitombo ny vokatra ary mampihena ny fandaniana.Serivisy + kalitao + Fampisehoana.
MSK (Tianjin) dia maka fomba fiasa azo ampiharina amin'ny fampiharana ny fahaiza-manapaka metaly avo lenta mba handresena ny fanamby amin'ny mpanjifa.Ny fifandraisana miorina amin'ny fifampitokisana sy ny fanajana dia tena ilaina amin'ny fahombiazantsika.Miara-miasa akaiky amin'ny mpanjifa izahay mba hahatakatra ny filany.
Niorina tamin'ny 2015, MSK (Tianjin) Cutting Technology CO., LTD dia nitombo tsy tapaka ary nandalo Rheinland ISO 9001 fanamarinana.
Ny vokatray farany
Carbide 2-blade End Mill Tungstène fanapahana Milli ...
Fikosoham-bary faran'ny sodina tokana ho an'ny aluminium
Tungstène vy roa lela taper baolina cutter e ...
2 sodina baolina orona farany fikosoham-bary
Carbide V Groove Chamfer Drill Bits Ho an'ny Aluminu ...
Tungstène Carbide dingana Drill Bit
CNC Tungsten Drill Tool Metal Solid Carbide Cutting Bits Spot Chamfer Drilling Bit |CNC fitaovana
MSK carbide fikosoham-bary |High performance |manala puce mora foana
PCB Drill Bit Circuit Board Drill Bits CNC sokitra ho an'ny Print Circuit Board